Dad Soomaali ah oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday Xajka Sanadkan + AKHRISO – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Sacuudiga ayaa waxa ay shaacisay dad Soomaali ah oo geeriyooday intii ay ku guda jireen gudashada Waajibaadka Xajka ee sanadkaan 2018-ka.
Agaasimaha Waaxda u adeegidda Xujeyda Fahad Abuu Daalib oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dhimashada labo oo Soomaali ah ay timid kadib markii shalay ay isbuurasho ka dhacday Magaalada mina oo 5-KM u jirta Magaalada Barakeysan ee Maka.
Allaha u naxariisteen dadka Soomaalida ah ee isbuurashadii ka dhacday Magaalada mina ku dhintay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jira Xaaji Axmed Saalax iyo Xaaji Xasan Maxamed jimcaale.
Inta badan waxaa Xajka markii la gudanaayo dhaca isbuurasho sababta dhimasho iyo dhaawac ,balse sanadkii aynu soo dhaafnay ayaan laga soo warinay wax dhimasho ah sida dowladda Sacuudiga ay shaaciysay.